Mino aho fa tafahoatra ny fahombiazan'ny varotra sosialy B2B | Martech Zone
Andao atomboka ity resaka ity amin'ny filazako fa tsy mitombina daholo ny porofo ananako. Tsy mbola nanao fikarohana be dia be aho hanaporofoana ny toetrako; Manohy manana olona marobe mibitsibitsika amiko fotsiny aho fa tsy mampiasa media sosialy hitarika valiny. Ary tsy mijaly mihitsy izy ireo; mahomby ny orinasany.
“Andraso!”, Hoy ianao nanambara, “Afaka nanao zavatra tsara lavitra ry zareo!”
Tsia. Ny iray amin'ireo orinasa dia manana fitomboana mihoatra ny 100% YoY amin'ny tsena mifaninana be. Tsy misy amin'ireo mpitarika na ny mpiasan'izy ireo mihazona ny fisian'ny media sosialy tsy miovaova. Ny ankamaroan'ny fitarihany dia avy amin'ny kaonferansa izay manatrika eran'izao tontolo izao. Manana ekipa mpivarotra ao anaty izy ireo izay manaraka ireo fitarihana ireo ary mitarika ny fivadihan-trano.
Orinasa iray hafa vao nanangana birao vaovao ary mamatsy vola ny fitomboany. Manana vokatra fampidirana izay tsy manana fifaninanana amin'ny indostrian'ny Enterprise izy ireo, ary manao sonia ny mpanjifa haingana araka izay azon'izy ireo aseho azy ireo ny demo. Matotra - tsy misy media sosialy.
Tsy miresaka fanaraha-maso ny fanairana fotsiny aho… fa miresaka ihany aotra apetraka amin'ny paikadin'ny media sosialy ry zareo.
Etsy ankilany, manana orinasa iray iarahako miasa aho izay nilaza tamiko fa tsy manao na inona na inona izy ireo fa ny fampiroboroboana ny media sosialy satria mandeha tsara izany. "Inona koa no mbola nanandramanao?", Hoy aho nanontany. “Tsy misy, tsy mila izany izahay.”, Hoy ny tompon-trano. Mahavariana, noho izany ny orinasa iray miantso voka-tsoa ny valin'ny media sosialy dia tsy manao afa-tsy ny media sosialy. Ahoana no ahalalan'izy ireo fa mandeha ?!
Mifoha ny mpivarotra
Nisy mpiara-miasa tamiko nilaza tamiko vao haingana fa ny CMO azy dia nesorina vao haingana taorian'ny volana maromaro nitaterany ny fika momba ny zava-poana tamin'ny solaitrabe. Fijery pejy, fanarahana, tiana ary retweets… tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny famoronana fidiram-bola na fitomboana.
Manana mpanjifa nankalaza ny fahaizan'ny media sosialy izahay, nanangona mpanaraka goavambe amin'ny sehatra media sosialy. Niasa mafy tokoa izy ireo mba hikolokoloana sy hikolokoloana ny tambajotra sosialy. Fa raha ny amin'ny demo sy ny fisintomana kosa dia tsy nisy ifandraisany velively ireo isa ireo.
Mitohy amin'ny tranokalako ny fandinihako anecdotal. Na dia mahazo nibble kely aza aho amin'ny alàlan'ny LinkedIn, dia mamokatra ny Facebook sy Twitter aotra vola miditra. Vao haingana aho no nanandrana ary nitondra mpamaky fanampiny an'aliny hifaneraserana amin'ny alàlan'ny mpitantana Facebook. Ie .. fantatrao izany. Tsy nandeha.
Olana efatra amin'ny marketing amin'ny media sosialy
Misy olana efatra mandratra ny fahafahantsika mahazo varotra lehibe ateraky ny media sosialy:
Fikasana - manaraka anao ve ireo mpankafy sy mpanaraka anao amin'ny tambajotra sosialy satria mikaroka momba ny fividianany manaraka izy ireo ary mijery ny orinasanao? Ny vinavinako dia ampahany kely amin'ny mpihaino anao… ary mahafinaritra anao ny manandrana mamantatra hoe iza marina izy ireo.
mari-pankasitrahana - ny tetezamita eo amin'ny tambajotra sosialy sy ny anao Analytics dia feno banga, ny lehibe indrindra amin'ny varotra rehetra dia avy amin'ny Tweet na Facebook Update. Tsy azo atao izany; sarotra fotsiny.
Funnels - Ny mpivarotra rehetra dia tia manintona ny lalan'ny fiovam-ponao ary hilaza aminao fa zava-dehibe ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fahatsiarovan-tena sy ny fanovana. Tsy ny filaminana ny olana; eo anelanelan'ny. Alain'ireo mpanjifa sary an-tsaina ity fantsona mahafinaritra ity izay misy ny prospect mandingana ny dingana farany mankany amin'ny manaraka. Hafa mihitsy ny zava-misy. Ela kilometatra miala ny fampifandraisana ao amin'ny media sosialy ny fiovam-po. Mety handany taona maro vao hitondranao ny fahefana an-trano izay anananao dia tokony hekena. Ezaka iray taonina izany ary tsy misy famerenam-bola firy.
Vanity - tsy mahatalanjona ve ny mahazo fahitana an-jatony na an'arivony, tiany, bitsika, retweet, fizarana na fidirana amin'ny fifaninanana? Izany dia - ny ekipanay dia nahavita izany ary nahatratra dimy ambin'ny folo tamin'ny fahaizan'ny media sosialy. Ny olana, mazava ho azy, dia tsy nisy tamin'ireo metrika ireo nitarika raharaham-barotra. Rehefa tsy miantso ny telefaona dia tian'ny mpivarotra ny manondro ireo metity zava-poana hanodinana ny sain'ny olona.
Ireo mpivarotra dia tokony hiasa avy vola miditra mihemotra amin'ilay fanantenana. Ny fahafantarana ny fiavianao dia tokony ho laharam-pahamehanao indrindra ary avy eo mitondra fiara amin'ny alàlan'ireo mpampita vaovao sy fantsona ireo.
Tsy milaza aho fa tsy hiasa ny media sosialy na tsy afaka miasa, marihiko fotsiny fa matetika aho mahita fampiasam-bola amin'ny marketing amin'ny paikady hafa izay manana tamberim-bola avo lenta kokoa, mitaky ezaka kely kokoa ary mora tohina.
Tsy kivy amin'ny media sosialy koa aho. Tsapako fa ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ny fanekena, ny fahefana ary ny fahatokisana dia afaka miteraka vokatra lehibe avokoa. Milaza fotsiny aho fa matetika no mihoa-pefy ny valiny amin'ny media sosialy. Raha misy milaza aminao fa tsy mitovy dia zahao ao ny orinasa ary hadihadio ny fomba hahazoany karama.
Ny vinavinako dia tsy amin'ny alàlan'ny media sosialy izany.
Tags: Attributionfacebook adsLinkedInhaino aman-jery sosialyfanamarihana ny media sosialyTwitter
Maninona ny mpivarotra no mila CMS ao amin'ny Toolkit amin'ity taona ity